Gabdho horey u sheegay in ay ka Baxayaan Daacish oo wali ku sugan Syria – Radio Daljir
Maajo 16, 2015 3:21 b 0
Sabti, May 16, 2015 (Daljir) — Sahra Ibrahim Halane iyo Salma Ibrahim Halane oo ah Mataanayaal haysta dhalashadda dalka Britain ayaa la sheegay inaysan ka soo baxsanin Kooxda Daacish, sida warar horeu sheegeen.
Mataanayaasha oo 17-jirro ah ayaa la sheegay inay haatan ku sugan yihiin gudaha dalka Syria, sida laga soo xigtay ilo ku dhowdhow Qoyskooda.Mataanayaasha oo ay ka geeriyoodeen rag ka tirsanaa Kooxda Daacish ayaa la sheegay inay Toddobaadkan la soo xiriireen Aabahooda, Ibraahim Halane oo ay u sheegen inay bad-qabaan, kuna sugan yihiin gudaha dalka Syria.
Aabaha dhalay gabdhahaasi ayaa u sheegay Wargeyska The Sun inay la soo xirireen gabdhihiisa, una sheegeen inay wax kasta isbedeleen.
Dhinaca kale, hadal ka soo baxay Waaxda Arrimaha Dibedda ee Britain ayaa lagu sheegay inay baaritaano ku hayaan wararka ay Saxaafadda Britain horey uga qoreen inay saddex gabdhood oo haysta dhalashadda Britain ka soo baxsadeen Kooxda Daacish.
Labo Toddobaad ka hor, ayaa waxaa Shabakadda Wararka ee Mosul Eye lagu soo qoray inay Mataanayaashaasi ka baxsadeen Kooxda Daacish, lana baadi-goobayo.